Cadaado Guryaha oo lagu kiraynayo 2,500 Dollar ilaa $3,500 +Warbixin | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cadaado Guryaha oo lagu kiraynayo 2,500 Dollar ilaa $3,500 +Warbixin
Magaalada Cadaado waxyaabaha ay ka faa’iidey doorashada ka socoto magaalada ee xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Magaalada waxay mrti gelisay ergooyinka beelaha, musharaxiin iyo siyaasiyiin caan ah oo u ololeynaya musharaxiinta ay taageersan yihiin.
Hoteelada ku yaal magaalada ayaa ah kuwo aad u yar, intooda badana adeegyada muhiimka ah uma dhameystirna, taasina waxay keentay in musharaxiinta iyo dadka kale ee la socda ay kireystaan guryaha shacabka ee villooyinka oo qaarkood loo dhisay qaab casri ah.
Durdurka ergada iyo musharaxiinta ayaa magaaladii waxay kusoo kordhiyeen sicir barar aan horay looga arag Cadaado iyo guud ahaan magaalooyinka Soomaaliya oo heerkii ugu sareeyay ee lagu kireeyo guryaha ay Cadaado jabisay. Waxaana halkii guri ee nooca Villada ah (Shan ilaa lix qol, musqulahiisa iyo kushiinkiisa) lagu kireynayaa qiimo kala duwan oo ka bilowda 2,500 Dollar ilaa $3,500.
Guriga Villada ah ee dhex ka dhiska ah ama is dulsaarka loo yaqaan ee ku yaal bartamaha magaalada una dhow xarunta madaxtooyada Galmudug waxaa lagu kireeyaa $3,500, halka guryaha kale ee ka yara durugsan bartamaha magaalada lagu kireeyaa 2,500 dollar.
Tan ugu yaabka badan ee Cadaado ay kaga macaashtay musharaxiinta ayaa ah in kireystaha guriga waajib ay ku ah inuu bixiyo labo bil oo isku xiran, taasina ay tahay heshiis ay wada gaareen dadka deegaanka oo aysan jirin cid ku xadgudbi karto heshiiskaas. Musharaxa kireystahana waxaa qasab ku ah inuu bixiyo labo bil lacagtood, waxaana suuragal ah ama ay dhacday in hal todobaad uu deganaadaa musharaxa, marka la doortana uu dib ugu laabto Muqdisho. Waa la yaab in hal todobaad aad ku kireysato guri villa ah lacag dhan 7,000 dollar oo labo bilood lagaa qaaday (Min $3,500).
Waxaa macaashka qeyb ka ah milkiilayaasha gaadiidka qurxan ee raaxada iyo ciidamada la isku kireysto, gaadiidka nooca Hiluxy oo musharaxiinta ku socdaan.
Dadka deegaanka waxay ii shegeen in bilooyin ka hor inta aysan bilaaban doorashada xubnaha labada aqal, in guryaha lagu kireyn jiray 100 dollar ilaa 150, balse sicir bararka guryaha uu bilowday markii ergooyinka iyo musharaxiinta soo gaareen Cadaado.
Ugu danbeyntii, dadka Cadaado waxay ogsoon yihiin in isbadalka dhinaca kirada ay sidii ay horay u ahayd doorashada ka hor inay kusoo laaban doonto, marka ay soo dhamaadaan arrimaha doorashada, magaaladana ay noqon doonto mid degan.